अनि फेरि ओलीलाई सरापेर बसौं ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, कार्तिक २१, २०७८ मा प्रकाशित
थाहा पाइस् होला नी भिरघरे ! ओली भन्ने मान्छे ज्याद्रो नै लाग्यो । हाम्रै महान र राष्ट्रपिताको क्षेत्र चितवन पुगेर राम र सीताको पूजा गरेर आए । हिन्दू धर्म मान्नेहरुलाई एकोहो¥याएर फर्किए । फेरि हाम्रो काम्रेडको बारेमा नानावली कुरा गरे ।
गर्छन् हौ विध्वंसे काका । तापनि प्रचण्डले जस्तो नचाहिने र एकैछिनमा झुठो सावित हुने कुरो त गरेनन् होलानी । प्रचण्डले त ‘राजाको मान्छेलाई भेटेपछि ओलीले गणतन्त्र मास्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्’ भनेर प्याच्च बोले । एकैजनाले पत्याएन । त्यस्तो पानी मरुवा कुरो गर्दै हिड्ने पनि नेता हुन्छ ?
सत्य कुरा गर्दा नपत्याए नपत्याउन्, नपत्याए कसले के नाप्छ ? देखिनस् भिरघरे ! हाम्रो सर्वहाराका महान नेता प्रचण्डले २ न. प्रदेशमा पुगेर उपेन्द्र यादवसंग पार्टी एकीकरण गर्ने विषय कसरी उठाए । अब उपेन्द्रको पार्टीलाई हाम्रो काम्रेडले क्षेत्रीय पार्टीबाट राष्ट्रिय पार्टी बनाई दिने अरे । अब हाम्रो प्रचण्डले भनेपछि नहुने भन्ने कुरै हुँदैन ।
हो काका ! अहिलेसम्म यो नेपालमा प्रचण्डले भनेको मात्रै भाको छ । अब जसपामा माओवादी विलय भएपछि उनले कल्पना गरेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्व स्थापित हुन्छ र समाजवाद लटरम्म फल्छ । सहिदहर्को ईच्छा पनि पुरा हुन्छ । एमसीसीमा झुटो बोलेको पोल हाम्रो देउवाले खोल्दिहाले । देउवा र प्रचण्डले मिलेर सही गरेर पत्र पठाइ सकेका रान् । अनि जनतालाई ढाट्न नानाथरी कुरो गर्ने प्रचण्ड अब नाङ्गै भए नि ।
घोचेर नबोल भिरघरे ! चुनापसम्म पर्खेको भए हुने थियो नि ! देउवालाई पनि सत्य कुरो गर्न हतार लाग्छ । अनि तेरो गगनले पनि अब आउने चुनापबाट एमाले बढारिने भाषन गरेका छन् । यो चुनापसम्म काँग्रेस र हामी मिल्यौ भने एमाले सकिन्छ ।
हुन त हो नि काका ! तर गगनले त्यही भाषनमा नेपाली काँग्रेस एक्लै चुनाप लड्छ र कुनै सिनो काँधमा बोकेर हिड्दैन पनि भनेका छन् । वास्तवमा अब नेपाली काँग्रेसले आफ्नो काँधमा माओवादी भन्ने सिनो बोकेर वैतर्णी तार्ने कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, पोखरामा आफ्नो उम्मेद्वारलाई नराम्रोसंग हराइयो । अहिले पनि काँग्रेसीहरु त्यो घटना सम्झेर थकथक भाका छन् ।
हौ भिरघरे दाइ ! माओवादीसंग अब कोही पनि चुनावी मोर्चा गठन गर्न तयार हुँदैन । यदि उपेन्द्र यादव तयार भए भने उनी पनि २ नं. प्रदेशमा एक्लिन्छन्। त्यसै त प्रभु साहाले हाराबारा खेलाउन थाली सके । विचरा प्रचण्ड ! कहिले ओली र राजा मिलेको कल्पना गर्छन्, कहिले उपेन्द्रसंग पार्टी एकता भएको सपना देख्छन् । कहिले काँग्रेसलाई आफूले ठूलो गुन लगाएकाले आफूहरुलाई चुनापमा काँग्रेसले सघाउनै पर्ने घोषणा गर्छन् । कहिले चितवन जिल्लाका काँग्रेस सभापतिले प्रचण्डका वाउ–छोरीलाई डाँडो कटाउने कुरो गरेर आफ्नो चित्त दुखाएको गुनासो गर्छन् ।
बढी नबोल सण्डे ! प्रचण्डले जे बोले सत्य बोले । गगनले पनि काँग्रेस एक्लै चुनाप लड्छ भन्न नहुने । एक्ला–एक्लै लड्ने हो भने एमालेले सपलाई बढार्छ । त्यत्रो गुन लगाएर काँग्रेसको सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि अहिले हामीलाई एक्लै छोड्न मिल्छ ? माधव नेपालको योगदान पनि बिर्सन मिल्दैन । भने जति नभए पनि एमालेको सानो चोइटो भए पनि लिएर देउवालाई सहयोग गर्न आएकै हुन ।
विध्वंसे काका ! राजनीति हो, काँग्रेसले च्यापेन भने फेरि पनि ओलीको पाउ पर्दा हुन्छ । अहिले त माओवादी र माधववादीको पार्टी ‘कहाँ गइस् हराउने, बिलाउनेको फेद’ भने जस्तै भाको छ । टेक्ने जमिन पनि छैन, समाउने हाँगो पनि छैन । काँग्रेसले एकातिरबाट लात हान्छ, एमालेले अर्कोतिरबाट चाबुक मार्छ । यस्तो अवस्थामा कि त कसैको अनुगृहित पात्र, कि त पुनः मुषिको भव !
वाइयात कुरो नगर भिरघरे ! हामी एक्लै पर्ने हो भने चुनापै हुन दिँदैनौ । वर्तमान गठबन्धन चुनापका लागि पनि हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । अदालत मिलाउने प्रचण्ड, सप्पै मिडिया गठबन्धनको पक्षमा ल्याउने प्रचण्ड, एमाले चोइट्याउन ल्याउने प्रचण्ड, माधवलाई काँधमा बोकेर दौडाउने प्रचण्ड, काँग्रेसको पाउमा लगेर प्रधानमन्त्रीको पद चढाउने प्रचण्ड, अहिले आएर उनैसंग निहुँ खोज्न मिल्छ ? यदि हामीलाई सहयोग हुँदैन भने भिषण आन्दोलनको आँधिबेहेरी ल्याएर भए पनि चुनाप रोक्छौं ।
बढी नखोक काका ! तिम्रो पार्टीको आव्हानमा आन्दोलन त होइन आमसभा पनि हुँदैन । अलि जनता बटुल्न सक्ने माओवादीका नेता एमालेतिरै गैहाले । यता माधव नेपालका केन्द्रीय सदस्य पनि एक दुई गर्दै ओलीतिरै तर्किए । अनि जनताविनाको भिषण आन्दोलन हुन्छ ?
के कुरो गर्छस् भिरघरे ! हाम्रो भनेको भिषण क्रान्ति गर्ने पार्टी हो । यदि आन्दोलनमा सहभागी भएनन् भने हतियार झिकिन्छ, मान्छे मिचिन्छ, ऐन कानून कुल्चिइन्छ । हामीलाई कसैले केही गर्न सक्तैन । यही वर्ष भित्र ३३ लाख पार्टी सदस्य बनाउने घोषणा हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले गरी सकेका छन् । ती ३३ लाख पार्टी सदस्य काठमाडौं ओरालेपछि ओली देउवा सप्पै भाग्छन् ।
लौ भिरघरे दाइ ! यी काकाले पनि प्रचण्डले जस्तै दिउँसै सपना देख्न थालेछन् । अब आउने चुनापमा समानुपातिक तर्फ सात लाख भोट आयो भने माओवादी तेस्रो पार्टी बन्न सक्छ । ३३ लाख पार्टी सदस्य त एमाले र काँग्रेसको समेत गणना गर्दा मात्र हुन्छ । हावाको गफ गर्ने प्रचण्डको विश्वास गर्ने अब विध्वंसे काका जस्ता मात्र बाँकी छन् ।
ठिक भन्यो सण्डे भाइले ! प्रचण्ड विचरा ! के भनौं, कसो गरौं, चुनापमा काँबाट उठौं, चितवनमा एमाले र काँग्रेसले टिक्न दिदैनन् । फेरि रोल्पाबाटै उठ्ने हो कि ! सिन्धुली र जाजरकोट पनि सुरक्षित छैन । जनार्दन शर्माको क्षेत्र र रोल्पा भन्दा अन्त माओवादीको जिरो होला जस्तो छ भनेर छटपटिएका छन्।
तैले भनेर हुन्छ ? पहाडमा भए ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म तराईका जिल्लामा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जहाँबाट उठेपछि हाम्रो प्रचण्डले जित्छन् । तिमारुले भोट नदिएर हुन्छ जनता सप्पै हाम्रो पक्षमा छन् ।
लौ काका अहिले मनको लड्डु खार बस चुनापमा मुस्किलले दुई सिट आउँछ । अनि फेरि ओलीलाई सरापेर बस । हिड् सण्डे ! यस्ता मनचिन्ते कुरो नसुनौं ।
लु, काका जै नेपाल !